အားလုံးညစ်ညမ်းအလေးအနက်ဖြစ်ရပါမည်။ တခါတရံသူကရီစရာနှင့်ပေါ့ပေါ့နိုင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာသင့်ငပဲကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ထိုးသွင်းရတာမျိုး၊အကြောင်းရင်းတွေပေးရတာမျိုးလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်အမာခံလိင်သင်၏မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးနှင့်အတူအားဖြင့်ညဥ့်သွားစေမည်ဟုရယ်စရာအခြေအနေများနှင့်အတူမှီခိုနေကြသည်ဘယ်မှာအခမဲ့ရယ်စရာညစ်ညမ်းဂိမ်းအပေါ်ရယ်စရာညစ်ညမ်း၏ဤလမ်းကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစုဆောင်းမှုတွင်လိင်ဂိမ်းအမျိုးမျိုးရှိပြီး၎င်းတို့သည်မျိုးဆက်သစ်များမှဖြစ်သည်။, ကျနော်တို့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်အချို့သောအံ့သြဖွယ်အင်ဂျင်ပုံစံလှုပ်ရှားမှုနှင့်ရူပဗေဒရှိသည်သောဂိမ်းနှင့်အတူလာသမျှသောဇာတ်ကောင်ဒါအစစ်အမှန်ပုံပေါ်စေမည်,အချိန်အများစုကိုသူတို့နည်းနည်းကာတွန်းဆရာများမှာပင်။ ဂိမ်းများ၏မျိုးဆက်သစ်ကိုလည်းသင်ရှိသည်အံ့သောငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်ဤဂိမ်းကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်,ပြီးပြည့်စုံလက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းလိုက်ဖက်မှုနှင့်အတူလာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပြတင်းပေါက်သို့မဟုတ်မက်ကရိုပေါ်တွင်ပြေးလျှင်နေပါစေသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သူတို့ကိုကစား,ဒါကြောင့်မက်ကရိုသို့မဟုတ်အန်းဒရွိုက်အပေါ်ပြေးလျှင်နေပါစေသင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်ပေါ်မှာသူတို့ကိုကစား။, အဆိုပါဂိမ်းသည်သင်၏ဘရောက်ဆာသို့တိုက်ရိုက်ပြေးနေသည်၊သင်တပ်ဆင်ခနှင့်ဒေါင်းလုပ်မရှိသောဂိမ်းကိုခံစားနိုင်လိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အပေါငျးတို့သဂိမ်းများကိုအခမဲ့သင်တို့အဘို့အလာကြသည်နှင့်ငါတို့သည်ဤပလက်ဖောင်းမှတားမြစ်ခြင်းမရှိသောဝင်ရောက်ခွင့်ကိုဆက်ကပ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်သလိုတနေရာတည်းမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်တဲ့တခြားဆိုဒ်တွေမတွေ့ရပါဘူး။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစွန့်လွှတ်ရန်အဘို့အဘယ်သူမျှမတောင်းဆိုမှုများရှိလိမ့်မည်။ သင်ဤဂိမ်းကစားခြင်းမပြုမီသင်ပြုရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်တစ်ခုတည်းသောအရာကိုသင်အသက် 18 နှစ်ကျော်ဖြစ်ကြောင်းအချက်ကိုအတည်ပြုရန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ထိုသို့ပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ရှိသောဂိမ်းအားလုံးသည်သင့်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ရယ်စရာညစ်ညမ်းဂိမ်းမှကြွလာသောအခါ,တီထွင်သူအများစုရုပ်ပြောင်လိင်ဂိမ်းများကိုစဉ်းစားနေကြသည်။ က်ေနာ္တို႔မွာအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကသင်သည်အခြားဆိုဒ်များပေါ်တွင်ရှာတွေ့ရုပ်ပြောင်ညစ်ညမ်းဂိမ်း၏တူညီသောမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်သင်အဲလျဆာသို့မဟုတ်အန်နာကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဂိမ်းများကိုသင်ရှာမည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျအဲလျဆာနှင့်အန်နာသို့မဟုတ်သူသည်သူတို့၏တွန်းအားပေးနှင့်မြည်းအတွက်သူ၏မုန်လာဥနီနှာခေါင်းကိုထည့်လေ့မရှိသည့်အတွက်ဂိမ်းကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ င္ငံေရးအာေဘာ္ေတြနဲ႔လည္းဂိမ္းေတြအမ်ားႀကီးေဆာ့ပါတယ္။, ရယ်စရာလိင်ဂိမ်းများကိုဖန်တီးသူများအတွက်ကြီးမားသောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ပင်လူအမျိုးမျိုးတို့ကလိုချင်သောဂိမ်းများစွာရှိသည်။
ငါတို့သည်လည်းသင်ရီစရာနှင့်အရူးအခြေအနေများအချို့ကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်အတွက်ဂိမ်းတွေနဲ့လာကြ၏။ ဟာသချဲ့ကားတွေနဲ့ဇာတ်ကောင်တွေရှိပြီးအဲဒီဂိမ်းတွေမှာစုစုပေါင်းချော့မော့ပြီးလှည့်ရတဲ့နာမည်ကြီးတွေတောင်ရှိတယ်။ သင်ဤဆိုဒ်တွင်စွန့်စားမှု၏အမျိုးမျိုးကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်,အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်သို့ဖွင့်အဘယျသို့သော. ပြီးတော့စုဆောင်းမှုအသစ်တွေထပ်ထည့်ထားတယ်။ ရုံသစ်ကိုလွှတ်ပေးရှာနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်တခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သူတို့လာအချိန်အားဖြင့်,ကျနော်တို့ပြီးသားစတိုးဆိုင်၌သင်တို့အဘို့ရှိသောအရာကိုခံစားကြည့်ပါ။
ကျနော်တို့အခမဲ့လိင်ဂိမ်းကစားဆိုဒ်ရှိသည်ဟုပြောသောအခါ,ကျနော်တို့တကယ်ကိုဆိုလိုတာပါ။ အကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဂိမ်းကစားခြင်းများအတွက်ပေးဆောင်စေလိမ့်မည်သည့်မှတဆင့်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း,ငါတို့သည်သင်တို့မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်အရှုံးမပေးစေဘယ်တော့မှနှင့်ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း၏အဖွဲ့ဝင်များပင်မသင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါသင့်ရဲ့အိုင်ပီလိပ်စာကိုသိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အဆုံးစာဝှက်စနစ်အဆုံးကမ်းလှမ်းတဲ့ဆိုက်ရှိသည်။ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကြော်ငြာတွေကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါသူတို့တွေကဒါတွေကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မဟုတ်တဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောလျှင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးပိုက်ဆံပါစေ။, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းခံစားကြာကြာကြိမ်ဖြုန်းသောသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ကစားသမားရှိပါကကျနော်တို့ကပိုပေးဆောင်ရ။ ဒါကြောင့်,ငါတို့သည်သင်တို့အမ်း၏အခြားအင်္ဂါရပ်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုပေါ့ပ်တက်နှင့်အတူကွာသငျသညျကိုမောင်းဘယ်တော့မှမ. ဒါဟာအားလုံးရယ်စရာလိင်ဂိမ်းကစားရဲ့,ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အလေးအနက်ထားဒီဆိုက်အပြေးယူပါ။